China Fuel Tanker API Camlock Coupling Adapter fekitori uye vagadziri | Jiasheng
Tangi Trailer Zvikamu
API Kudonhedza Adapter
API Guruva Cap
Vapor Kudzorera Vent & Valve
Angle Tarisa Valve
Manhole Dome Chivharo
Remote API Kuwedzeredza Valve
Fuel chiteshi Spill Container
Tanker Fuel Dhirivhari Kudonhedza E ...
Vapor Kudzorera Valve
API Giravhiti Kudonhedza adapta yakagadzirirwa chaizvo API vharuvhu uye chinongedzo,
Kubuditsa zvakanaka. Iyo oblique angle dhizaini iri nyore kune giravhiti inoburitsa kuita kuti iyo ichiburitsa yakachena zvakanyanya uye nekukurumidza, inogona zvakare kuchengetedza iyo yakapfava chubhu kuti irege kukombama kana uchiburitsa.
Mukadzi coupler uye oiri drain vharafu inoenderana neyakajairwa API Rp 1004. Inogona kubatana neyakajairwa API coupler. Iine kurapwa kwepamusoro kweiyo oxidation uye Stainless Simbi, yakakwira ngura kuramba, yakasimba uye yakasimba.
Chigadzirwa Chigadzirwa Yakakwira Yemhando Isina Simbi API Adapter
Mashoko muviri Simbi isina ngura
Chezita dhayamita 4 ″ - 2.5 ″ / 4 ″ -3 ″ / 4 ″ -4 ″
Tempreture: -150 ° F kusvika + 250 ° F
Pakati: peturu, parafini, dhiziri, mvura, nezvimwe
API Giravhiti Coupler
API adapter coupler ndiyo yakanakisa dhizaini yeAPAP yepasi adapta kuve nechokwadi chekuchengetedza uye nekukurumidza kurodha uye kudzikisa. Yakagadzirwa neyemukati 'muromo' iyo inoita kuti kubatana kuve nyore. Vakaroorana vane standard 4, API RP-1004 tank matori adapta.
Kuiswa kuti uite vapor kupora Pane hutatu hukuru (2.5 ″ 3, 4 ″) kugutsa sarudzo dzakasiyana siyana.Mukati mechiporofita dhizaini iri nyore kana uchivhura Vapor Adapter Valve. iyo Vapor Adapter Valve.
Camlock coupler inovandudza kugona kana kuburitsa mafuta kubva mutangi. Iyo yakasarudzika dhizaini inokodzera kuburitsa kuita kuti iyo inoburitsa ichenese zvakanyanya uye nekukurumidza. Kunyatso chengetedza iyo hosi kuti irege kukomberedzwa. Mukadzi-Coupler interface inoenderana nezvinodiwa neAPP RP1004, inogona kuve yakabatana neyakajairwa API Coupler.
1.Gravity Kudonhedza Couple
Iyo Gravity Drop Coupler inovandudza kugona kana uchiita basa rekuburitsa. Iyo oblique angle dhizaini inokodzera giravhiti kuburitsa kuita kuti iyo ichiburitsa yakachena zvakanyanya uye nekukurumidza.Kunyatso chengetedza iyo hosi kuti irege kukombama kana uchiburitsa. Mukadzi-Coupler interface inoenderana nezvinodiwa neAPP RP1004, inogona kuve yakabatana neyakajairwa API Coupler.
2. Kubatsirwa uye Zvimiro
* Kuomesa Kurapa: Wese vharafu muviri wakapasa yakakosha yekuomesa maitiro ekuvandudza hupenyu hwayo hwebasa.
* Inonzwisisika Dhizaini: Iyo oblique angle dhizaini inokodzera giravhiti kuburitsa uye nekunyatso chengetedza iyo inosunungura hoses.
* Yakasimudzwa Saizi: Dhizaini dhizaini yakagadzirirwa zvinoenderana neIPI RP1004 yakajairwa, inomira neyakajairwa API chinongedzo.
* Kurema Kurema: Muviri mukuru wakagadzirwa nealuminium alloy, iri yakajeka uye yakasimba.
* Aluminium alloy die-cast mamiriro, anodized kurapwa.
* Cam yekuvhiya oparesheni, yakaiswa nemuchina.
* 22.5 kona yakadzika kudzikisa kudzora kwemafuta.
* Yakagadzirirwa chete mubato wakanangana nekukiya inoita kuti kubatana kuve nyore uye kusimba kwekuvimbika.
* Cam uye yemahara-kuyangarara inobvisa kukweshera uye kukotama, zviri nyore kubatana pasina girizi.
* Nyore yekutarisa kuyerera kuburikidza neyemwenje yekuona girazi.
* Inoshandiswa kune akawanda matangi matangi, akapatsanurwa kurodha uye kuburitsa kwakasiyana mafuta.
* Anosangana API1004 mureza.
Mashoko muviri aruminiyamu
Inoshanda Nzira Zvokuimba
Tsanangudzo 4 × 2.5 inches, 4 × 3 inches, 4 × 4 inches
Pakati: Peturu, Diziro, Dieseri
Giravhiti Kudonhedza Coupler
dhizaini yakanakisa yeAPAP yepasi adapter kuti ive nechokwadi chekuchengetedza uye nekukurumidza kurodha uye kudzikisa. Yakagadzirwa neyemukati 'muromo' iyo inoita kuti kubatana kuve nyore. Vakaroorana vane standard 4, API BR-1004 adapta yematangi.
Pin: Stainless simbi
1. Aluminium alloy die-cast mamiriro, anodized kurapwa.
2. Cam kukiya inoshanda, yakaiswa nemuchina.
3. 22.5 kona yakadzika inoderedza kuchengetedza kwemafuta.
4. Chaizvoizvo dhizaini yekukiya inoita kuti kubatana kuve nyore uye kusimba kwakasimba.
5. Cam uye yemahara-kuyangarara inobvisa kukweshera uye kukotama, zviri nyore kubatana pasina girisi.
6. Nyore yekutarisa kuyerera kuburikidza nemwenje yekuona girazi.
7. Inoshandiswa kune akawanda matangi matangi, akapatsanurwa kurodha uye kuburitsa kwakasiyana mafuta.
8. Anosangana API1004 mureza.
Saizi: 4 * 4, 4 * 3, 4 * 2.5
Uchishandisa Nzira: Zvokuimba
Kushanda Pressure: 0.6MPa
Temperature dungwerungwe: -20 ~ + 70 ℃
Pashure: Mhepo Kunzvenga Coupler
Zvadaro: Frence API Adapter Valve
API Camlock payakabatanidzwa Adapter
Wang Ji Maindasitiri Ekumanikidzwa Nzvimbo, Suining County, Xuzhou Guta, Jiangsu Province, China